မလေးရှားရောက်မြန်မာများ စစ်ကောင်စီကို ကန့်ကွက်ဆန္ဒပြ (NLD-Malaysia)
မလေးရှားနိုင်ငံ ကွာလာလမ်ပူမြို့တော် မြန်မာသံရုံးရှေ့မှာ မြန်မာနိုင်ငံ စစ်အာဏာသိမ်း တနှစ်ပြည့်ဆန္ဒပြရင်း ဖမ်းဆီးခံခဲ့ရတဲ့ မြန်မာနိုင်ငံသားတွေထဲက အများစုဟာ သောကြာနေ့အထိ ဖမ်းဆီးခံထားရစဲဖြစ်ပါတယ်။ ကိုဗစ်ရောဂါ ကန့်သတ်ချက်တွေကြား မြန်မာ့အရေး ဆန္ဒပြရင်း ဖမ်းဆီးခံခဲ့ရတဲ့ မြန်မာနိုင်ငံသားတွေ လွတ်မြောက်ရေး ကြိုးပမ်းမှု နောက်ဆုံးအခြေအနေကို မလေးရှားရောက် မြန်မာနိုင်ငံသားတွေကို လိုက်လံကူညီပေးနေသူ တဦးကို မဆုမွန်က ဆက်သွယ်မေးမြန်းထားပါတယ်။
မဆုမွန် ။. ။ ဖမ်းခံရသူတွေထဲမှာ ကလေးတွေလည်းပါတယ်လို့ပြောပါတယ်။ နောက် အထောက်အထားလက်မှတ်မရှိသူတွေလည်းပါတယ်။ နောက် UNHCR ကုလသမဂ္ဂဒုက္ခသည်များဆိုင်ရာ မဟာမင်းကြီးရုံး အသိအမှတ်ပြု လက်မှတ်ကိုင်ဆောင်ထားသူတွေလည်းပါတယ်ပြောပါတယ်။ နောက်ဆုံးအခြေအနေဘယ်လိုရှိပါသလဲ။
အကူအညီပေးသူ ။. ။ ကလေး ၂ ယောက်ကတော့ ပြန်လွတ်လာပြီ။ မနေ့ညကပဲပြန်လွှတ်ပေးလိုက်တယ်။ နောက်ပြီးတော့ သူတို့ဆီမှာရှိကြတဲ့ လက်ဝတ်လက်စားတွေရယ်၊ နောက်ပြီးသံရုံးနားမှာ ရပ်ထားတဲ့ ကားတွေကိုလည်း မနေ့က ကားသော့တွေပြန်ပေးလိုက်တော့ ဒီနေ့မနက် ကားတွေကို သွားယူကြတယ်။ ကလေး ၂ယောက် အဖေ နဲ့ အမေ က UN ကဒ်တွေကို ကိုင်ထားတဲ့အတွက် ပြန်လွတ်လာဖို့ရှိပါတယ်။ သူတို့ပြောတာကတော့ ကိုဗစ်စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းနဲ့ မကိုက်ညီလို့ သူတို့ကို ဖမ်းထားတယ်ဆိုတဲ့ ပုံစံမျိုးပေါ့။ ကိုဗစ်စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းနဲ့ မကိုက်ညီရင် ဒဏ်ငွေတထောင်ရိုက်ပါတယ်။ ဒဏ်ငွေရိုက်ပေးရင်တော့ သူတို့ကို ပြန်လွှတ်ပေးပါတယ်။ ကွာလမ်လမ်ပူမြို့တော် အပိုင်မှာရှိတဲ့ ပူတူးစခန်း ကို ပို့လိုက်တယ်လို့ပြောပါတယ်။ မနေ့က သူတို့ကို ခေါ်သွားခဲ့တာက ဂျင်ဂျန်းထောင်အသေးလေးပေါ့။
မဆုမွန်။. ။ မလေးရှားမှာရှိကြတဲ့ တရားမဝင်အလုပ်သမားတွေကိုရော ၊ အဲဒီမှာရှိကြတဲ့ မြန်မာနိုင်ငံသားတွေကို ဒီလိုမျိုး အကူညီပေးနေတာဆိုတော့ မလေးရှားမှာရှိကြတဲ့ မြန်မာနိုင်ငံသားတွေကို လက်ရှိအနေအထားအပေါ်မှာ ဘာများအကြံဥာဏ်ပေးချင်ပါလဲ။
အကူအညီပေးသူ ။. ။ ပုံမှန်အားဖြင့်ကတော့မလေးရှားမှာ ဆန္ဒပြကြမယ်ဆိုရင် သက်ဆိုင်ရာ ရဲစခန်းက ခွင့်ပြုချက်ပေးပြီဆိုရင် သတ်မှတ်ထားတဲ့ အချိန်နဲ့ နေရာမှာ ဆန္ဒပြလို့ရပါတယ်။ မနေ့ကဖြစ်စဉ်က ခွင့်ပြုချက်ရထားပေမယ့်လည်း သူတို့ဖက်က နေ ကျန်းမာရေး ကိုဗစ်စည်းကမ်းတွေနဲ့ ဘာသွားငြိလည်းမသိဘူး။ လောလောဆယ်တော့ ကျနော်တို့ စုံစမ်းနေတုံးပါ။ တချို့ကလည်း UNHCR ကဒ်ကိုင်ထားတော့ UN ကနေ တရားဝင် ထုတ်ပေးမှာပေါ့။ ထုံးစံအတိုင်းပေါ့ တရားမဝင် အလုပ်သမားတွေနဲ့ ပတ်သက်ပြီးတော့ ဖမ်းဆီးတဲ့ကာလတွေနဲ့ ပြည့်နေတဲ့အခါတော့ ဒီဖြစ်စဉ်မှာကတော့ သူတို့ကို ဖမ်းပြီးတော့ ပြန်ပို့လို့ရမယ့်အနေအထားမဟုတ်ဖူးလေ။ UN နဲ့ မလေးရှားအစိုးရနဲ့က ပြသာနာတွေက ရှိနေတဲ့အခါမှာတော့ ဒီကလေးတွေကိစ္စမှာ ဘယ်လိုတာဝန်ယူမလဲဆိုတဲ့အပိုင်းမှာတော့ နည်းနည်းတော့ စိုးရိမ်တာပေါ့နော်။ UN ကနေ ဒီကိစ္စကို တာဝန်ယူလုပ်ပေးမယ်ဆိုရင်တော့ ဒီကလေးတွေ မြန်မြန်ဆန်ဆန်လွတ်မြောက်မယ်။ နောက်ဆုံးအထောက်အထားမဲ့တာ မှန်သည့်တိုင်အောင် UN ကဒ်တွေထုတ်ပေးနိုင်တဲ့အနေအထားဖြစ်လာရင်တော့ ပိုကောင်းတာပေါ့ဗျာ။
မွနျမာ့အရေး ဆန်ဒပွစဉျ ဖမျးဆီးခံရတဲ့ မလေးရောကျ မွနျမာတှေ နောကျဆုံးအခွအေနေ
မလေးရှားနိုငျငံ ကှာလာလမျပူမွို့တျော မွနျမာသံရုံးရှမှေ့ာ မွနျမာနိုငျငံ စဈအာဏာသိမျး တနှဈပွညျ့ဆန်ဒပွရငျး ဖမျးဆီးခံခဲ့ရတဲ့ မွနျမာနိုငျငံသားတှထေဲက အမြားစုဟာ သောကွာနအေ့ထိ ဖမျးဆီးခံထားရစဲဖွဈပါတယျ။ ကိုဗဈရောဂါ ကနျ့သတျခကျြတှကွေား မွနျမာ့အရေး ဆန်ဒပွရငျး ဖမျးဆီးခံခဲ့ရတဲ့ မွနျမာနိုငျငံသားတှေ လှတျမွောကျရေး ကွိုးပမျးမှု နောကျဆုံးအခွအေနကေို မလေးရှားရောကျ မွနျမာနိုငျငံသားတှကေို လိုကျလံကူညီပေးနသေူ တဦးကို မဆုမှနျက ဆကျသှယျမေးမွနျးထားပါတယျ။
မဆုမှနျ ။. ။ ဖမျးခံရသူတှထေဲမှာ ကလေးတှလေညျးပါတယျလို့ပွောပါတယျ။ နောကျ အထောကျအထားလကျမှတျမရှိသူတှလေညျးပါတယျ။ နောကျ UNHCR ကုလသမဂ်ဂဒုက်ခသညျမြားဆိုငျရာ မဟာမငျးကွီးရုံး အသိအမှတျပွု လကျမှတျကိုငျဆောငျထားသူတှလေညျးပါတယျပွောပါတယျ။ နောကျဆုံးအခွအေနဘေယျလိုရှိပါသလဲ။
အကူအညီပေးသူ ။. ။ ကလေး ၂ ယောကျကတော့ ပွနျလှတျလာပွီ။ မနညေ့ကပဲပွနျလှတျပေးလိုကျတယျ။ နောကျပွီးတော့ သူတို့ဆီမှာရှိကွတဲ့ လကျဝတျလကျစားတှရေယျ၊ နောကျပွီးသံရုံးနားမှာ ရပျထားတဲ့ ကားတှကေိုလညျး မနကေ့ ကားသော့တှပွေနျပေးလိုကျတော့ ဒီနမေ့နကျ ကားတှကေို သှားယူကွတယျ။ ကလေး ၂ယောကျ အဖေ နဲ့ အမေ က UN ကဒျတှကေို ကိုငျထားတဲ့အတှကျ ပွနျလှတျလာဖို့ရှိပါတယျ။ သူတို့ပွောတာကတော့ ကိုဗဈစညျးမဉျြးစညျးကမျးနဲ့ မကိုကျညီလို့ သူတို့ကို ဖမျးထားတယျဆိုတဲ့ ပုံစံမြိုးပေါ့။ ကိုဗဈစညျးမဉျြးစညျးကမျးနဲ့ မကိုကျညီရငျ ဒဏျငှတေထောငျရိုကျပါတယျ။ ဒဏျငှရေိုကျပေးရငျတော့ သူတို့ကို ပွနျလှတျပေးပါတယျ။ ကှာလမျလမျပူမွို့တျော အပိုငျမှာရှိတဲ့ ပူတူးစခနျး ကို ပို့လိုကျတယျလို့ပွောပါတယျ။ မနကေ့ သူတို့ကို ချေါသှားခဲ့တာက ဂငျြဂနျြးထောငျအသေးလေးပေါ့။
မဆုမှနျ။. ။ မလေးရှားမှာရှိကွတဲ့ တရားမဝငျအလုပျသမားတှကေိုရော ၊ အဲဒီမှာရှိကွတဲ့ မွနျမာနိုငျငံသားတှကေို ဒီလိုမြိုး အကူညီပေးနတောဆိုတော့ မလေးရှားမှာရှိကွတဲ့ မွနျမာနိုငျငံသားတှကေို လကျရှိအနအေထားအပျေါမှာ ဘာမြားအကွံဉာဏျပေးခငျြပါလဲ။
အကူအညီပေးသူ ။. ။ ပုံမှနျအားဖွငျ့ကတော့မလေးရှားမှာ ဆန်ဒပွကွမယျဆိုရငျ သကျဆိုငျရာ ရဲစခနျးက ခှငျ့ပွုခကျြပေးပွီဆိုရငျ သတျမှတျထားတဲ့ အခြိနျနဲ့ နရောမှာ ဆန်ဒပွလို့ရပါတယျ။ မနကေ့ဖွဈစဉျက ခှငျ့ပွုခကျြရထားပမေယျ့လညျး သူတို့ဖကျက နေ ကနျြးမာရေး ကိုဗဈစညျးကမျးတှနေဲ့ ဘာသှားငွိလညျးမသိဘူး။ လောလောဆယျတော့ ကနြျောတို့ စုံစမျးနတေုံးပါ။ တခြို့ကလညျး UNHCR ကဒျကိုငျထားတော့ UN ကနေ တရားဝငျ ထုတျပေးမှာပေါ့။ ထုံးစံအတိုငျးပေါ့ တရားမဝငျ အလုပျသမားတှနေဲ့ ပတျသကျပွီးတော့ ဖမျးဆီးတဲ့ကာလတှနေဲ့ ပွညျ့နတေဲ့အခါတော့ ဒီဖွဈစဉျမှာကတော့ သူတို့ကို ဖမျးပွီးတော့ ပွနျပို့လို့ရမယျ့အနအေထားမဟုတျဖူးလေ။ UN နဲ့ မလေးရှားအစိုးရနဲ့က ပွသာနာတှကေ ရှိနတေဲ့အခါမှာတော့ ဒီကလေးတှကေိစ်စမှာ ဘယျလိုတာဝနျယူမလဲဆိုတဲ့အပိုငျးမှာတော့ နညျးနညျးတော့ စိုးရိမျတာပေါ့နျော။ UN ကနေ ဒီကိစ်စကို တာဝနျယူလုပျပေးမယျဆိုရငျတော့ ဒီကလေးတှေ မွနျမွနျဆနျဆနျလှတျမွောကျမယျ။ နောကျဆုံးအထောကျအထားမဲ့တာ မှနျသညျ့တိုငျအောငျ UN ကဒျတှထေုတျပေးနိုငျတဲ့အနအေထားဖွဈလာရငျတော့ ပိုကောငျးတာပေါ့ဗြာ။
မလေးရှားရောက်တရားမဝင် မြန်မာလုပ်သားများ ဒဏ်ကြေးပေးပြီး တရားဝင်အလုပ်လုပ်နိုင်မည်